कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन : राष्ट्रपति काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालबाट कोही पनि गरिबिका कारण कोही भोकै नपर्ने र कोही भोकले नमर्ने …. – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन : राष्ट्रपति काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालबाट कोही पनि गरिबिका कारण कोही भोकै नपर्ने र कोही भोकले नमर्ने ….
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालबाट कोही पनि गरिबिका कारण कोही भोकै नपर्ने र कोही भोकले नमर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा कोरोना महामारीले नेपालमा रोजगार कम हुने र वैदेशिक रोजगारीबाट धेरै फर्किने सम्भावना भए पनि गरिबीका कारण कोही भोकै नमर्ने बताएकी हुन् ।
कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण विगत वर्षको नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदाका बखत जस्तो धेरै पाहुनालाई आमन्त्रण गरिएको छैन भने दर्शक र सञ्चारकर्मीको उपस्थिति पनि पातलो छ । बैठकका गतिविधिलाई विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछन् ।
नेपालको संविधानबमोजिम हरेक जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुने भएकाले त्यसको दुई साताअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास छ। यसअघि संसद्मा पूर्वबजेट छलफल भइसकेको छ।
यसअघि सांसद्हरुको कोरोना भाइरस परीक्षण गरिसकिएको छ भने हरेक बैठकमा प्रवेश बैठककक्ष बाहिर तापक्रम जाँच र स्यानिटाइजर लगाउने प्रबन्ध गरिएको छ। भौतिक दूरीसहित तर्जुमा गरिएको बैठक कक्षा सांसद सबैले मास्क लगाएर प्रवेश गरेका थिए। राष्ट्रपतिको सम्बोधन सकिएपछि साँझ ६ बजे दोस्रो बैठक बस्ने कार्यतालिका छ।